Ezekiela 17 - Ny Baiboly
Ezekiela toko 17
Fanetrena sy fanandratana ny taranak'i Davida - Fanoharana ny amin'ny voromahery sy ny hazo sedera sy ny voaloboka - Fampiharana ny fanoharana amin'i Sedesiasa - Fampanantenana ny fanjakan'ny Mesia.
1Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe:
2Ry zanak'olona, manaova fampanonona ary milazà fanoharana amin'ny taranak'Israely; milazà hoe:
3Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Tonga tao Libàna ny voromahery lehibe, manana elatra lehibe, ka malalaka be ny fivelatry ny elany, ary rakotra volo samihafa soratra izy, ka nalainy ny tendron'ny sedera. 4Notsoahany ny rantsany avo indrindra, nentiny ho any amin'ny tany Kanaana anankiray, nataony tao an-tanànan'ny mpandranto anankiray. 5Rahefa izany dia nangalany koa ny zava-maniry tamin'ny tany nataony teo amin'ny tany lonaka, nataony teo amoron'ny rano be, namboleny toy ny famboly hazomalahelo. 6Naniry io, tonga foto-boaloboka nisandrahaka, ivaiva ihany, nitodika nankany amin'ilay voromahery ny rantsany, ary tao ambaniny koa ny fakany; tonga voaloboka izy, ka sady nanaroka no nandrantsana.
7Nisy voromahery makadiry hafa koa, sady be elatra no matevim-bolo; ary indro fa ity voaloboka dia maimay handefa ny fakany mankany aminy, ary nanatsotra ny rantsany mankany aminy, avy eo amin'ny kisahasaha nambolena azy, mba hotondrahany. 8Ny nambolena azy dia teo amin'ny tany tsara, amoron'ny rano be, mba handravina sy hamoa izy, ary ho tonga voaloboka tsara indrindra. 9Lazao hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Ho vanona va izy? Tsy hongotana va ny fakany, ka hahintsana koa ny voany, mba hahamaina azy? Halazo ny raviny tanora rehetra nitsimoka taminy. Tsy ilàna sandry mahery na olona maro akory ny hamongotra azy amin'ny fakany. 10Efa voavoly izy, fa moa ho vanona va? Tsy halazo va izy, raha vao tsofin'ny rivotra avy atsinanana? Halazo eo amin'ny kisahasaha naniriany izy.
11Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe: Lazao amin'ny taranaka miodina hoe: 12Tsy fantatreo va ny hevitr'izany? Lazao hoe: Indro, tonga tany Jerosalema ny mpanjakan'i Babilona, ka naka ny mpanjakany amam-panapaka tao, dia nitondra azy ho any aminy any Babilona. 13Rahefa izany dia naka ny anankiray tamin'ny taranak'andriana izy, ka nanao fanekena taminy sy nampianiana azy. 14Ny lehilahy mahery amin'ny tany dia efa nalainy hietren'ny fanjakana, tsy ho afa-miarina, ary hitana ny fanekeny mba haharitra. 15Niodina tamin'io anefa izy, fa nandefa iraka tany Ejipta mba hanome soavaly sy olona maro azy. Ka hahomby va izy? Ho afa-mandositra va, izay nanao izany? Nivadi-panekena izy, ka ho afa-mandositra ve! 16Velona aho, - teny marin'ny Tompo Iaveh: dia any amin'ny tanànan'ilay mpanjaka nampanjaka azy nanamavoany ny fihavanany, nivadihany fanekena, any amin'io any Babilona no hahafatesany. 17Ary rahefa avy ny ady, ka hanandratana tovon-tany sy hanorenana manda handringanana olona maro dia tsy hiasa hanampy azy amin'ny tafika lehibe sy vahoaka maro Faraona. 18Nanamavo ny fianianana izy, tamin'ny nivadihany ny fanekena, nefa efa nanolo-tànana; efa nanao izany rehetra izany izy, ka tsy ho afa-mandositra.
19Ka izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Velona aho, dia ny fianianana tamiko no nohamavoiny ary ny fanekeko no nivadihany, ka hantsingeriko eo an-dohany izany. 20Hovelariko eo amboniny ny fandrika haratoko, ka ho voa ao amin'ny haratoko izy; hoentiko any Babilona izy, ka hotsaraiko any, noho ny nivadihany fitokiana tamiko. 21Ny mpandositra rehetra tamin'ny miaramilany rehetra ho lavon'ny sabatra; ary ny sisa kosa, haely amin'ny vazan-tany rehetra; dia ho fantatrareo fa izaho Iaveh no niteny.
22Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Hangalako ny tendron'ny sedera avo, ka hamboleko; holaingosako ny sampany milenodenoka amin'ny loha rantsany, ka hamboleko eo an-tampon'ny tendrombohitra avo sy manerinerina. 23Eo amin'ny tendrombohitra avon'Israely no hamboleko azy; handrantsana sy hamoa izy, ary ho tonga sedera mahatalanjona honenan'izao fody amam-boromadinika rehetra izao eo amboniny, honenan'ny vorona rehetra eo amin'ny alokaloky ny rantsany. 24Ary ho fantatry ny hazo rehetra any an-tsaha, fa izaho Iaveh efa nanetry ny hazo avo, ary nanandratra ny hazo voaetry; nahamaina ny hazo maitso, ary nahamaitso ny hazo maina. Izaho Iaveh, no niteny, ary Izaho no hanatanteraka. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1016 seconds